AmaMandarin-Wooden Shrimp Squid Jig Abakhiqizi - China Mandarin-Wooden Shrimp Squid Jig Suppliers & Factory
Ukuheha Ukuhola Ukuhola Kwama-squid Jigs I-Octopus Wood Shrimp Bait Ngokubamba Ukudoba
Uhlobo Lure: Ipensela Jigs - Ukudoba ngama-jig kubhekwa kabanzi njengendlela ephumelela kakhulu yokubamba ama-bass nezinye izinhlanzi ezinkulu, zamanzi angenasawoti eziphendula kahle ekuhambeni okungaqondakali, okuqondile kwejig enesisindo. I-Hard Bait
I-squid jig ebonakalayo enemibala
Ilungele ukuDoba ama-squid- Kulula ukuyisebenzisa. Kubuye kube lula kumuntu omusha. Idizayini ephelele ingakwazi
khulisa u-catches futhi adale kumnandi ngokwengeziwe.
Umphumela Okhanyayo- Umzimba okhanyayo, ubude obude, inaliti ye-hook encane, ukuqina okuhle, akukho zi-barbs. Ikona kulula susa izinhlanzi ku-hook.
Konke Kwenziwe Ngezandla- I-hook yensimbi engenasici, uzipho wejig yokuqina okukhethekile, donsela ngamandla. Lapho i-squid isixhumekile, akulula ukubaleka.
I-Electroplate Luminous squid jig
Kuyisidingo sokudoba sabadobi.
Isenzo sokuntywila esisheshayo nesisheshayo.
Ithuluzi elinamandla lokubamba ukubamba izinhlanzi ezinkulu.
Isebenziseka kalula ngenxa yenhlanganisela efanele yokweqa nokugingqika.
Kufanelekile ukusetshenziswa okusha komuntu omusha nokusetshenziswa kobuchwepheshe.
Amehlo amakhulu aqothula isitayela senhlanzi isitayela se-squid
I-Electroplating Mandarin Fish Squid Jig
I-Computer Cloth Style Squid Jig
Ukudoba okungaphendulwanga kukhiqiza umkhiqizo nama-squid jigs wekhwalithi ephezulu, kufaka phakathi isikhunta nosayizi ohlukile; ezifana ezikhanyayo, ezikhazimulayo zendwangu, izingwegwe ezingashadile noma ezima-fan.
Okokuqala ama-squid jigs iyithuluzi lokudoba elikhulu lokudoba emanzini anosawoti, njenge-squid ne-octopus cathcing. Futhi-ke sinikezela ama-squid jigs ngekhwalithi yaseJapan, imfanzi yangempela efana nempilo ukuheha izinhlanzi. Okubaluleke kakhulu ukuthi sinikezela ngenkonzo yezobuchwepheshe kumakhasimende ethu, ukuze sikwazi ukusekela kakhulu ibhizinisi lakho.Ungakhetha isikhunta ikakhulukazi intshisekelo, futhi ungaba nokupakisha nelogo yakho.